Huwori, Kusarongeka Zvonzi Ndidzo Honzeri Dzekushaikwa hweHupfu muNyika
Kukadzi 25, 2020
Mutengo weupfu unonzi wakakwidzwa kudarika mutengo wakatarwa nehurumende wemadhora makumi manomwe patsapo yemakirogiramu gumi.
Dambudziko rekushaikwa kwehupfu munyika rinonzi nevamwe ratodzika midzi, panguva iyo paine kunakurirana nyoka mhenyu pakati pehurumende nevanogaya upfu, avo vari kunzi vari kunzvengesa upfu, zvikuru hweRoller Meal.
Hurumende yakabhadhara kare chidimbu chemari inofanirwa kutengeswa nayo rudzi rwehupfu urwu, ivzo zvinozoita kuti vatengi vahuwane nemutengo uri pasi, asi izvi zvinonzi hazvisi kubatsira sezvo hupfu hwacho huri kuramba huchishaikwaq muzvitoro asi huchiwanikwa kumusika mutema, uko kwahuri kuwanikwa nemari iri pamusoro.
Vanogaya upfu vari kupomerwawo mhosva yekuwanza upfu hweNgwerewere, uhwo hunodhura, pachinzvimbo chekuti vagaye hweRoller Meal hunokwaniswa kutengwa nevanhu vose nemutengo uri pasi.
Ruzhinji rwevanhu munyika rwunonzi rwave kuswera rwuchifudza zvitoro kuri kumirira kuti rwungangosangana nemotokari dzinodhirivhara upfu, pachinzvimbo chekunge rwuchiita zvinopa pundutso kumhuri pamwe nenyika.
Mumwe anoti aswera akagarira upfu ndaAmai Rufaro Chakanyuka vekuGreendale muHarare, avo vanoti vazohuwana asi huchitengeswa nemadhora zana nemakumi mashanu patsapo yemakirogiramu gumi, pane mutengo wakatarwa nehurumende wemadhora makumi manomwe pamakirogiramu gumi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira, VaMasimba Kuchera, vanoti dambudziko rekushaikwa kwehupfu riri kukonzerwa nekusarongeka kwechirongwa chehurumende chekutsigira vanogaya upfu nemari kuitira kuti vagohutengesa nemari iri pasi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZanu PF, VaGadzira Chirumhanzu, vanotiwo chanyanya kukonzera dambudziko rekushaikwa kwehupfu huwori, uhwo vanoti hwatekeshera munyika.
VaChirumhanzu vanoti veruzhinji munyika vari kutarisira kuti hurumende ichakasika kutora matanho ekuparadza midzi yehuwori iyi isati yasunga nekusvina nyika yose.
Svondo rapera vanogaya upfu vakapomerwa mhosva yekutengesa hwehupfu hwavanofanirwa kutengesera vanhu munyika kuDemocratic Republic of Congo, uko vanonzi vari kutengesa nemari iri pamusoro.
Mukupera kwesvondo mapurisa anonzi akapinda mumabhizimusi evanogaya hupfu, uko anonzi akawana upfu hunosvika matani zviuru zvishanu hwakanga hakachengetedzwa, hunofungidzirwa kuti hwaida kuendeswa pamisika mitema.
Asi mutauriri wesangano revanogaya hupfu, reGrain Millers Association of Zimbabwe, VaGarikai Chaunza vakaudza bepanhau reHerald kuti hapana chinoshamisa kuti vanogaya upfu vawanikwe vaine hupfu, sezvo riri iro basa ravo.
VaChaunza vakatiwo vamwe vanogaya hupfu vari kuita dambudziko rekushaya chekutakurisa upfu uhwu kuendesa kune vezvitoro.
Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe, VaTafadzwa Musarara, vanoti sangano ravo riri kupinza chibage munyika kubva munyika dzakaita seSouth Africa, Mexico, Brazil neThailand. Uganda yakazivisawo kuti ichatengesera Zimbabwe chibage.
Asi VaKuchera vanoti panotoda kuti pagadziriswe mitemo yemunyika kuitira kuti zvinhu zvakaita sehupfu zvisashaikwa munyika.
Kusvika matambudziko ose, kusanganisira huwori, zvagadziriswa
vakawanda vanoti dambudziko rekushaikwa kwehupfu munyika richaramba riripo kunyangwe nyika yakapinza chibage chakawanda zvakadii kubva kunze, nekuti pane vanenge vachiwana cheuviri kubva kumutengeswa kwehupfu pamisika mitema.